KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Xhosa Zulu
Afofantɔ—Painted Lady—Wɔahu Ne Ho Ahintasɛm No
EUROPAFO akyerɛ afofantɔ a ne ho yɛ fɛ a wɔfrɛ no painted lady (Vanessa cardui) ho anigye bere tenten ni, nanso wontumi nhu nea sɛ ahohuru bere twam a, ɛto wɔn. So wowuwu bere a awɔw bere aba no? Nhwehwɛmu foforo a wɔayɛ da biribi a ɛyɛ nwonwa adi. Afe biara no, sɛ edu saa bere no a, afofantɔ no twa kwan fi Europa atifi fam kɔ Afrika.
Nhwehwɛmufo aka nhwehwɛmu a wɔde mfiri ayɛ ne nea atuhoamafo pii a wɔwɔ Europa ahu no abom. Wɔn nhwehwɛmu no daa no adi sɛ sɛ ahohuru bere ba awiei a, afofantɔ yi ɔpepem pii tu fa ahum mu kɔ anafo fam. Wotumi tu kɔ soro bɛyɛ mita 500 ma enti ɛyɛ den sɛ nnipa behu wɔn. Ansa na afofantɔ no betwa kwantenten a ɛte saa akɔ Afrika no, wɔtwɛn kosi sɛ wobenya mframa a ɛbɛboa wɔn ma wɔatumi atwa kilomita 45 wɔ dɔnhwerew biara mu. Ɔkwan a wotwa afe biara no tenten yɛ kilomita 15,000, na wofi ase wɔ atifi fam wɔ Arctic ano de kowie anafo fam wɔ Afrika Atɔe fam baabi a osu tɔ na awia bɔ kɛse wɔ hɔ no. Ɔkwan a wotwa no te sɛ nea monarch afofantɔ a wɔwɔ Amerika Atifi fam twa no mmɔho abien. Egye awo ntoatoaso asia ansa na afofantɔ yi atumi atwa saa kwan yi akɔ aba.
Ɔbenfo Jane Hill, a ɔwɔ York Sukuupɔn a ɛwɔ England no kyerɛkyerɛ mu sɛ: “Bere a afofantɔ yi nam nyinaa no, na wɔretow nkesua repaapae wɔn mma.” Afe biara wɔnam saa kwan yi so de wɔn dɔm no tu fi Europa Atifi fam kɔ Afrika na wɔsan ba.
Richard Fox, a ɔda nhwehwɛmufo ano wɔ Butterfly Conservation adwumakuw no mu no ka sɛ: “Aboa ketewa yi a ne mu duru nnu gram biako, a n’amemene kɛse nyinaa te sɛ akoroteaa ti yi nnya hokwan nsua biribiara mfi afofantɔ a wɔanyinyin na wɔwɔ osuahu no hɔ, nanso wotumi twa kwan tenten yi kɔ san ba.” Fox toa so sɛ, “kan no na wosusuw sɛ mframa bɔ afofantɔ yi kɔ baabiara kɛkɛ kosi sɛ Britain awɔw a ano yɛ den no bekunkum wɔne wɔn asefo nyinaa.” Nanso nhwehwɛmu yi “akyerɛ sɛ afofantɔ yi yɛ akwantufo a wɔaben paa.”